Global Voices teny Malagasy » Mpifaninana ho solontenan’ny mpirotsaka an-tsitrapo ao amin’ny filankevipitantanana GV 2020: Khojasta Sameyee · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 08 Avrily 2020 3:54 GMT 1	 · Mpanoratra Khojasta Sameyee Nandika miora
Sokajy: Mediam-bahoaka, Blaogim-Piarahamonina GV, Filankevitra-GV-2020
Khojasta Sameyee  dia avy ao Afghanistana. Manana ny diploama bakaloreà amin'ny Fitrandrahana Harena Ankibon'ny Tany, ary amin'izao fotoana izao dia manohy fianarana haka ny diplaoma Master amin'ny Fitantanana Orinasa. Nandritra ireo taona dimy farany, nanao asan'ny mpanao gazety ho ana trano famoahambaovao samihafa tao Afghanistàna izy. Tamin'ny 2018, nomena fankasitrahana izy noho ny tatitra nataony momba ireo vehivavy, ny fandriampahalemana sy ny fahatoniana, loka iray avy amin'ny UNDP/N-Peace. Nanangana gazety iray tantanim-behivavy izy ary amin'izao fotoana izao dia miasa ho an'ny gazetiny manokana. Ny Aogositra 2018 izy no nanjohy ny Global Voices.
Ireo rehetra nirotsaka ho fidiana ho ao anatin'ny filankevipitantanana 2020 dia nasaina namaly ireo andiana fanontaniana vitsivitsy eto ambany. Aza misalasala mametraka fanontaniana fanampiny amin'i Khojasta atao ao anatin'ny toerana ho an'ny fanehoankevitra amin'ity lahatsoratra ity!
Nanomboka ny 2018 aho no niasa miaraka amin'ny Global Voices amin'ny maha-mpanoratra an-tsitrapo ahy, ary tena ankafiziko ny asa sy ezaka ataon'ireo mpikambana ato amin'ny GV izay manandratra ny feon'ny vahoaka any amin'ireo firenena atao ankilabao. Tena mahatalanjona tokoa ny hoe mamaky momba ny firenenao sy ny toedraharaha misy ao aminy ireo vahoaka manerana izao tontolo izao. Raisiko an-tanandroa ity fotoana ity mba hahatonga ahy ho mpirotsaka misimisy kokoa ato amin'ny GV ary hiasa amin'ny fanandratana ny feon'ireo olona manerana ny tany.
Noho izaho miasa amin'ny maha-mpanao gazety mpanolotra vaovao, toniandahatsoratra, mpamokatra fandaharana ho an'ny onjampeo ho ana famoahambaovao samihafa ao anaty firenena iray miaina fifandirana sy ady efa nandritra ny taona dimy, ary ankehitriny lehiben'ny gazety iray tantanim-behivavy, dia hizara ireo traikefako sy izay zavatra niainako aho, izay azoko tao anatinà fiarahamonina iray tena anjakan'ny lehilahy betsaka tokoa sy faran'izay tena anitsakitsahana ny zon'ireo vehivavy.
Raha mijery ny taona telo ho avy ianao, inona, araka ny hevitrao, no tokony ho laharampahamehana ho an'ny GV amin'ny maha-fikambanana azy?
Ho ahy, ny fitomboan'ireo mpanaraka ny GV sy ny fanampiana fiteny maro dia tokony ho laharampahamehana tsy maintsy irosoan'ny GV. Ohatra, vitsy ny olona ao Afghanistàna no mahafantatra ny GV sy ny asany, satria tsy misy amin'ny fiteny Persiàna/Dari ny GV. Arakaraky ny maha-maro ny mpanaraka antsika no hahazatra ny olona sy hampahalaza antsika.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/04/08/147708/